Ithegi: isirinji | Martech Zone
Ukuphela kwalo nyaka, ngaphezulu kwe-80% yabantu abadala baseMelika baya kuba ne-smartphone. Izixhobo zefowuni zilawula zombini i-B2B kunye neB2C kunye nokusetyenziswa kwazo kulawula ukuthengisa. Yonke into esiyenzayo ngoku inecandelo elihambayo kuyo ekufuneka siyibandakanye kwizicwangciso zethu zokuthengisa. Yintoni ukuThengisa ngeSelfowuni ukuthengisa okwenziwa ngefowuni kukuthengisa okanye isixhobo esiphathwayo, njengefowuni efanelekileyo. Ukuthengisa ngeselula kunokunika abathengi ixesha kunye nendawo